Madaxweynaha dalka oo maanta khudbad ka jeedinaya New York – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka oo maanta khudbad ka jeedinaya New York
Anwar Mohamed September 26, 2018
Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa maanta la filaya inuu khudbad ka jeediyo kal fadhiga 73-aad ee golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ee (UNGA 73) oo ka dhacaya magaalada New York ee Maraykanka
Qeybta dowlada u qaabilsan isgaarsiinta iyo macluumaadka lala wadaago warbaahinta ee NEXUS ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda rasmiga ah ee twitarka ku xaqiijisay in Mr. Kenyatta uu maanta ka hadli doono arrimo dhowr ah.
Sido kale waxaa la filaya inuu madaxweynaha tageera u raadiyo shirweynaha ku saabsan dhaqaalaha ee loo yaqaano ‘Blue Economy’.
Kenya ayuu qorshuhu yahay inay bisha Novembar ee sannadkan marti geliso shirkan.
Marka uu khudbadda jeediyo kadib , Mr. Kenyatta waxaa uu kulamo laba geesood ah la yeelanaya hoggaamiyaasha kale ee caalamka.
Mr. Kenyatta ayaa wada hadaladaasi xoogga ku saari doono sidii dhaqaale iyo maalgelin dheeraad ah loogu heli lahaa afar waxyaabood oo ugu waaweyn oo maamulka talada haya ee jubilee uu sheegay inuu wax ka qabanayo.
Arrimahan ayaa kala ah wax soo saarka, adeegyo caafimaad oo dhameystiran, guriyeynta iyo la tacaalidda cunno yarida.
Waxaa fadhiga golaha guud ee qaramada midoobay ka qeyb galaya in ka badan 150 ka mid ah hoggaamiyaasha caalamka.
Mr. Kenyatta ayaa sido kale la rajeynaya inuu madaxda ay kulamayaan kala hadlo sida wadamadooda ay gudaha wadanka uga sameyn karaan tageero dhanka amniga ah,maalgashiga, iyo horumarinta dhalinyarada.
Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa isla maanta yeelanaya kulan ku aaddan la dagaalanka cudurka qaaxada maadaama arrinkaasi lagu heshiiyay bishii labaad ee sannadkan.
Berri oo khamiis ah taarikhduna ay tahay 27-ka bishan, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dib u milicsanaya horumarka laga gaaray ka hortagga iyo xakameynta cudurada aanan la isku gudbin.
← DHAGEYSO Maxkamada sare oo maanta dhageysan doonto dacwad ku saabsan canshuurta shidaalka
Maraykanka oo cunaqabateyn saaray saraakiil ka tirsan dowlada Venezuela →